DUBBII HAALAAN KAN HIN BEEKNEE, ITTI HIMANUU HIN GALUUF !!!! |
Mooraan qabsoo Oromoo xaliila’uun dirqama. Wal sukkuumee wayitti ba’uun isaa waan hin hafnee. Yeroo fudhachuun isaa namoota hedduu yaaddeessa. Garuu yaadda’uun barbaachisaa miti. Bilisummaan booda akka sudaan kibbaa takaalamanii nama kolfaa ta’uu irra, dhugaa jiru wal hubachiisuu , waan Biyya keessaas alaas jiru beekuu, isa dhugaan dhaabbatuu fi dharaaf kachachaluu adda baasanii beekuun barbaachisaadha . Namnis ta’uu humni kamiyyuu namatti quba qabuu ykn nama komachuun dura, ani maalan hojjadhee ? jedhee of gaafachuun dogoggora irraa nama baraara. Amma nama komatanii sanii waa tokkollee osoo hin gumaachiin arrabsoo fi qeeqa tarrisuun bu’aan isaa salphina. Warra qabatamaan jireenya isaanii guutuu waan arganirraa dubbatan tuffatanii, anatu beekaa jennaan, dubbiin bubbultee qulqullaa’uun waan hin hafneef, qullaa dhaabbachuun ifa ..
Qabsoon Oromoo sadarkaa irra ga’ee jiru beekuun salphinarraa nama baraara. Ummati Oromoo, addatti Ummati Biyya keessa qaamaa qalbii maalitti jira ? jedhanii hin beekan taanaan, ammallee of taajjabsiisuutu dhufa. Ummati kun natti hin dammaquu jedhanii shira amma diinaa qixaa, Ummaticha irratti hojjachuun bubbulee salphachuu fi naafuutu dhufa. Waggaa 40 guutuu diina keenya innikkaa irraas ta’uu, abbootii garaa irraa waa hedduu barannee jirra. Ummati Oromoo akka warqee ibiddaan qoramee sadarkaa har’a irra jiru ga’ee jira. Qabsoo isaa doomsuuf dandeenyaan ammoo dhabamsiisuuf shirri hin gaggeffamiin hin jiru. garuu shirri sun hundi miidhaa adda addaa dhaqabsiisuus, qabsoo sabichaa gonkumaa duubatti hin deebifne. Kanarraa kanneen hin barannee, har’allee Ummata kana bifa gara garaan qormaata keessa galchanii kuffisuun, Umurii gabrummaa dheeressuuf kanneen tattafatan argaa jirra. Shira diinoota keenyaa akka kaleessaa fagootii ilaallee tilmaamnaa miti. hadhuura diinaa keessaa odeeffannoo hammaaraa jirra. Qabsoon Oromoo diinaan basaasamee diigamuu qofaa osoo hin taanee, diiguttillee ce’ee jira. Kanaaf qabsoon Oromoo dhumateef osoo jedhamuu, dhabamsiisuuf maallaqi miliyoonaan osoo irratti ramadamuu deebi’ee ka’ee, hadhuura UN seenee ajandaa ta’ee jira. Kun diinaaf boyichaa. Firaaf gammachuudhaa. Warra shira diinaa milkeessuuf ifaajjaniif gadda. Sabboontootaaf ammoo gammachuudhaa. Addatti Qabsaa’ootaaf Injifannoodhaa. Barru kiyya kutaa 2ffaattan deebi’aa.
Namni Dubbii haalaan hin beeknee,,,itti himanuu hin galuuf jedhee barruun eegalee kutaa 1ffaa keessatti, 1. ODAA BUS……OROMIYAA 2. LAMMAA MAGARSAA,,, irratti ilaalcha mataa kiyyaa ibseen jira. Har’a ammoo kanneen hafan ibsuun yaala.
OMN FI XUMURA ISAA :-
Midiyaan Oromoo heddummaachuun anaaf gammachuudhaa. Madaalli kiyya garuu lakkoofsaa miti. kaayyoo isaaniiti. Adeemsaa fi bu’aa ummata isaaniif buusan ykn qabaniidha . Kanarraa ka’ee OMN ilaaluun barbaada. OMN irratti Gonkumaa holola irratti oofuu hin barbaadu. Yaadan kaasuu ilaalaatii qorannoo mataa keessanii gaggeessaa . Yeroon kana jedhu Ilmaan Oromoo midiyaa kana keessatti qooda gumaachaa jiraniif kabajaan ani qabu guddaadha. Dheebuu ummata isaanii ilaalanii qooda mataa isaanii gumaachuuf kanneen seenan akka jiranillee nin beeka. Walumaa gala, qaama duraan mana kana ijaaree irraa lolas ta’ee jibba hin qabu. Garuu midiyaa kana wayitan qoradhuu, qaamni kaayyoo dhokisaa qabu tokko akka duubaan jiru ifatti mul’ataa waan jiruuf, akkasumas, OMN Midiyaa walabaa Ummata kanaaf hojjatanitti hidhachuurra, adeemsa fi kaayyoo midiyaa diinaatti maxxanaa deemuun isaa boruu ummata kanaaf hin toluu jedhee waanan yaadeef, ummata beeksisuutu dansaadhaa jedheen barruu jalqabaa kana gadhiisee.
Qabxiilee shakkii na keessatti uuman :-
OMN osoo hin eegaliin baatii ja’aa dura, nama maqaa isaa kaasuu hin barbaannee, TV Oromiyaa wayyaanee keessaa gaaffii tokko emeeliin naaf ergee ture. kunis, midiyaan TV Afaan Oromoon hojjatu tokko Ameerikaa keessatti banamuuf jiraa, maaliif isaanitti hin iyyattuu ? naan jedhee. Hubadhaa OMN banamuun baatii 6 dura. Gaaffiin gaafadheen, ati akkamiin beekuu dandeessee ? ka jedhu. Innis dhaga’een jiraa naan jedhee, siif gaariidhaa jedhee na sossobullee yaale. Isa booda mee addaan baafadhaa jedheen adda baane. Inni edaa anaan kaadhimachuu isaati. dhugumayyuu baatii 6 booda banamee.
OMN banamee osoo hin bubbuliin namoonni dandeettii fi OMN ijaaruu keessatti qooda ol aanaa qaban keessaa ba’uu fi hokkara hanga har’aatti keessa isaatti qabbana hin argatiin uumuu eegalee. Akka adda baafanneetti, OMN hanga har’aatti namoonni of keessaa baasaa jiru warra ABOn hidhata qabanudhaa. ABO ABAARUUN, HOGGANA XIQQEESSUUN, ulaagaa fudhatama argachuuti. Kun ammoo kan itti fufudha.
OMN baatii 6 booda akka banamuu, TV Oromiyaa wayyaanee keessaa akkuman dhaga’een dubbiin kun attamiin akka umamee qulqulleeffachaa osoon jiruu, OMN banamee baatii 3 booda, Pirojektii OMN ka qopheessee, miseensa boordii omn , Ameerikaa irraa fagoo jiraatu, nama Piroojektii TV Oromiyaa wayyaanee qopheessee ta’uun dhaga’ee mirkaneeffadhe.
OMN jalqaba irra , Ummata hawwachuuf sochii ABO dhiheessaa ture addaan kutee, hanga har’aatti waa’ee ABO qilleensarraa dhorkee jiraachuun isaa OMN eenyuuf ? gaaffi jedhuuf karaa saaquu…
OMN yennaa jalqabuu beektoota Oromoo qabsoo Oromoo fi seenaa Oromoo bu’uraa kaasanii waliin jiran kan hammatee fakkaatee haa dhihaatu malee, har’aa harka nama tokkoo keessa galtee, Dirree OPDO keessatti akka barbaaddee taatu, Junaddiin faa’aa sa’a barbaadanitti itti hajajan ta’uu,,
Abbaa Duulaan bara 2015 Biyya Ameerikaa turetti , Nama inni barnootaaf Biyya alaatti ergee fi Gaazexessitoota Irbaata afeeruu isaa ifatti argamuu,,,,.
Waan nama raajuu , intarneeta irratti wayyaaneen maqaa adda addaa hirtee qabsoo Oromoo akka xureessaniif kanneen ifatti ramaddee jirtu irra jireessi, Juwaarii fi OMN qeeqamuu gonkumaa hin jaalatan. Inumaa maqaa irra deddeebiin arginuun qabsoo Oromoo ABOn gaggeeffamuu akkasumas, HOGGANOOTA qabsoo kana hundeessan hundaa abaaru.
Juwaar hanga har’aatti, dhaabbilee Siyaasaa Oromoo kamiinuu waliin dhaabbachuu hin barbaannee. Wal ga’iillee waliin taa’ee hin beeku. garuu warra OPDO keessaa dhufan waliin morma jala wal dhungatanii wal ga’ii taa’aan.kana malees, Dhaabbilee siyaasaa Oromoo OPDOn alaa kamiinu waliin taa’ee, dhimma siyaasaa Oromoo irratti marii tokkollee gaggeessee yaada mataa isaa hin gumaachuu dhiisuu,,,
Juwar hanga har’aatti ABO waliin walitti dhufeenya tokkollee hin goonee. Ega Biyya alaa ba’ee kaasee gonkumaa tattaaffii qabsoo Oromoo keessatti of hirmaachisuuf fedhiin argisiisee hin jiru. akka dhaabaatti kan itti deemee haasofsiisee hin jiru. kun hundi duuba isaan maaltu jiraa laata ?
Qabxiilee ijoo 9n kana irraa ka’ee OMN qabeenyaa ykn shira eenyuudhaa ? isa jedhuu kaa’uun yaala.
Obbo Mallasaan cubbuun osoo hin godaaniin, Dhaaba micciiramaa bara 2008 dhaaba keessaa ba’ee karaa Juunaddii gurmeessanii akka turan warri keessa beekan ni dubbatu. Kaayyoon micciiramaa ABO dhuunfachuun Biyyatti galchuu ture. Obbo Mallasaan du’aniiruu , shirri isaanii garuu hin dhaabbannee. Shirri tokkoffaa yeroo fashaluu shira lammaffaa gaggeessaa jiran. Kunis har’allee karaa Junadddii gaggeeffamaa jira. Kaayyoon isaanii inni guddaan, akka dhaabaatti osoo hin taanee, akka midiyaatti Ummata Oromoo hawwatanii boruu dhaaba dhaabanii ABO dhuunfachuudhaa. Kana raawwachuuf durumaanuu OMN tu yaadame. Obbo JUWAAR waan namni eegalee tokko nama harkaa fudhatee dhimma itti ba’uutti ija jabeessa. Junaddiin Biyya alaa ba’ee suduudaan Juwaariin argachuun kana irraa madda.gareen Hogganoota Qabsoo jedhee wawwaataa jiru kaayyoon isaa inni guddaan, dhaabbilee siyaasaa hundaa liqimsee, Qabsoo kana dhuunfachuun kaayyoo bara 2008 san milkeessuudhaa. Kana dhugeessuuf miidiyaan addummaan filatan OMN dha.
Kaayyoon micciiramaa fashalutti aanee gaaga’amni fakkeessaa Junaddii irratti gaggeeffamee kanarraa madda. Junaddiin ammallee amma ergama isaa raawwatuutti , haadha warraa qabata qabsiisee ba’ee. Wayyaaneen haadha warraa isaa hidhaatti naqixee ergama isaa akka raawwatu dirqisiisaa jirti. Dursitoota OPDO Biyyaa ba’an keessaa kan waa’ee wayyaanee amma beeku hin dubbannee , Junaddii saaddoo qofaadhaa. Formulaan OMN kanadha. Waan hedduu nama ajaa’iibu tokko isiniif daba.
OMN banamee , duubarra namoonni keessaa ba’uun isaan yaaddeessuu irraa shirri nama argachuun kan gaggeeffamee Biyya keessatti ture. TV Oromiyaa wayyaanee keessaa Gaazexessitoota 20 ari’an. Akka yaada isaanitti ijoolleen kun Biyyaa akka baqattu ture. Biyyaa gaafa ba’an haala mijeessufii yaadamee ture. garu tokkon isaani hin baanee. Obbo Dinquun hundasaanii fudhatan. Kunis Obbo Dinqutti dubbii taatee, midiyaa jarrumti kannaniif cufuun dirqama dabalataa turtee. Kun hundi qabsoo Oromoo tarkaanfachiisuuf fakkaataaree ????ragaalee gurguddaa kanneen biroo yeroo biraa itti deebinaa, KAAYYOO gaaffii fi deebii Piraz. Isaayyaas irratti yaada qabu ibseen kutaa 2ffaa kana xumura.
OMN PIRAZADANTI ERTIRAA MAALIIF HAASOFSIISUUF YAADAN ?
Juwaar Mahaammad bara 2015 keessa Raadiyoo Jarman irratti Pirazadanti Ertiraa kun Dikitaataraa mana murtii edila addunyaatti akka dhihaatu qabu dubbachaa ture. kana malees kan qabosoo Oromoo quucarsee isaanii jedhee himachaa ture. kana qofaa miti, qabsoon Oromoo achii ba’uu qabdii jedhee dubbachaa ture. har’aa garuu maaltu argamee baasii amma kanaa baasanii gaaffii fi deebii akka gaggeessan namaaf hin galu. Qabsoon kun of kennuu gaafata. Akka waraqaa fi midiyaa irraa miti. bu’aa ba’ii hedduu qabdii.
OMN Intarviwuu kana maaliif gaggeessee ? jennee hin gaafannu. Kana gochuuf maaltu isaan kakaaseen garuu waan irratti xiyyeeffatamuudhaa. Tarii Junaddii faa’aatu ABO miidhuuf kana yaadaa jiraa laata ? waraana ijaarra kan jedhaniif Ertiraa filatanii laata ? waraana ijaaran kanaan ABO achi buqqisuu yaaduu laata ? moo akkuma ESAT maallaqa isaan gaafachuuf laata ? asiinis jedhan achin jedhan, waan kaleessa ittiin nama qeeqan ofiin ta’anii jiru. kan tufan arraabanii jiru.
BALAA QOSHEE FINFINNEE ILAALCHISEE :
Balaan ummata qoshee jiraatu irra ga’ee akka dubbatamee miti.shira wayyaanee of keessaa qaba. waan hedduu nama ajaa’iibu Filmiin qoshee irratti artistootaan hojjatamee Ummataaf akka dhihaatu TV itoophiyaan beeksifamaa ture torban osoo hin guutiin balaan kun umamuu isaati . beeksiisi sunis ni dhaabbate. Gama biraan , bakka qoshee sanatti namoota rakkatoo kosii achitti gatamu keessaa funaannatantu jira. Turstoonni achitti argamanii waan hedduu irratti hojjatan. Kun wayyaaneef yaaddoo ta’ee jiraate. Kanaaf wayyaaneen waan kana dhaabuuf mala dhawaachaa turuu kanneen keessa beekan ni dubbatu. Ta’ee jedhamee akka raawwatamee dubbatamaa jira.bubbuluus dhugaan ba’uun hin haftuu .